အမျိုးသမီးဝတ် 3D စိန်လက်စွပ် - Forever Gems
HKLR 032 (3D)စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 3,479,000 Ks. 6,958,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
HKLR 042 (3D)စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 5,859,000 Ks. 11,718,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,597,000 Ks. 5,194,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,469,000 Ks. 8,938,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,626,500 Ks. 9,253,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Women Ring YLR2516
Ks. 3,324,000 Ks. 6,648,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
HKLR 006 (3D)စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 3,773,500 Ks. 7,547,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
CLR 087 (A) 3D စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 5,564,000 Ks. 11,128,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 1,854,000 Ks. 3,708,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,113,000 Ks. 8,226,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
YLR2269 (3D) စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 2,069,000 Ks. 4,138,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
YLR2137 (3D) စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 3,136,000 Ks. 6,272,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,736,000 Ks. 5,472,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,571,000 Ks. 5,142,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 8,414,000 Ks. 16,828,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
HKLR 011(3D) စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 4,001,000 Ks. 8,002,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
HKLR 013-A (3D)စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 3,719,000 Ks. 7,438,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,529,000 Ks. 9,058,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,174,000 Ks. 8,348,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 5,244,000 Ks. 10,488,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,621,000 Ks. 7,242,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Online Customer will be contacted soonest by our sale staff who facilitate with detail services.If jewelry item chosen by customer needs to process order, price will be recalculated depends on the updated gold rate.
Ks. 2,581,000 Ks. 5,162,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,279,000 Ks. 4,558,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,779,000 Ks. 9,558,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,719,000 Ks. 5,438,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,829,000 Ks. 5,658,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,314,000 Ks. 6,628,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,869,000 Ks. 5,738,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Women Ring CLR087 (B)
Ks. 3,144,000 Ks. 6,288,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,129,000 Ks. 4,258,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
HKLR013 (B) (3D)စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 3,409,000 Ks. 6,818,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 731,000 Ks. 1,462,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 1,586,000 Ks. 3,172,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,279,000 Ks. 8,558,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 7,329,000 Ks. 14,658,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,849,000 Ks. 5,698,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Women CLR028 (3D)စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 3,159,000 Ks. 6,318,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Women CLR094 (3D)စိန်ပုံဆန်းလက်စွပ်
Ks. 3,784,000 Ks. 7,568,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,020,000 Ks. 4,040,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,794,000 Ks. 7,588,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။